March 4, 2021 - समृद्ध नेपाल
बिग बोसु सिजन १४ को विजेता रुबीना दिलैक बनेकी छन् । फाइलनमा रुबीनासँगै राहुल वैद्य अली गोनी निक्की तम्बोली र राखी सावन्त पुगेका थिए १४० दिनसम्म चलेको बहस, झगडा र ड्रामपछि रुबीनाले बिग बोस जित्न सफल भएकी हुन् ।खीले विकल्पमा दिइएको १४ लाख रुपैयाँ लिएर शो छोडिकी थिइन् । अली गोनीले सबैभन्दा कम भोट प्राप्त
बाराहा क्षेत्रको दर्सन गरि तपाइको भोलिको राशिफल पढ्नुहोस !
मेष राशि अरुको कुरामा बिशेष ध्यान नदिनु होला । मनमा कुबिचारले बास गर्नाले भोलिको समयमा केहि झन्झज पर्न सक्छ । खर्चको योग रहेको हुनाले लगानिमा ध्यान दिनु होला । बौधिक ब्यत्तित्व सगँको भेटघाटमा समय ब्यतित रहने छ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ । बृष राशि ब्यापार ब्यवसायको निम्ति राम्रो समय रहेको छ
बाख्रा चोरेर बेच्न लागेको अवस्थामा उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका १०खसी बजारबाट एक युवा पक्राउ परेका छन् । त्रियुगा नगरपालिका १५का बिष्णु बहादुर केसीले त्रियुगा नगरपालिका १४ स्थित ईन्द्रकमल सामुदायिक बनमा चराउन लगेको बाख्रा चोरेको आरोपमा रौतामाई गाउँपालिका ३लाफागाउँका ३३बर्षिय निरबहादुर कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।बाख्रा धनी केसीले फागुन १५गते जंगलमा चराउन लगेको ४ओटा बाख्रा चोरी
अञ्जुसँग डिभोर्स को लामोसमय पछि दोस्री श्रीमतीसँग मिडियामा मनोज भावुक हुदैँ छोरीसंग माफि मागे !
कुनै समयका सांगितीक क्षेत्रका उदाहरणीय जोडी थिए मनोज राज र अञ्जु पन्त । यी दुवै सांगितीक जगतका चर्चित हस्तिहरु हुन् । अञ्जु र मनोजले एकसाथ केही गीतहरु पनि गाएका छन् । यी दुईको जोडीलाई आदर्श जोडीको रुपमा हेरिने गरिन्थ्यो । यी दुई छुट्टिन्छन् भनेर सायदै कसैले सोचेका थिए एकअर्कासँग मनमुटाव निकै हुन थालेपछि अञ्जु र
लुगासुकाउने क्रममा करेन्ट लागेर एक महिलाको निधन !
भारतको हैदराबादमा लुगासुकाउने क्रममा करेन्ट लागेर एक नेपाली महिलाको ज्यान गएको छ् । नेपालमा सुदुर पश्चिम प्रदेश न ७अछाम जिल्ला तुमाँखाद गाउँ पालिका वडानं ८धमालि निवासि खट बोगटी कि बुहारि तिल बोगटिकि श्रीमती जानकी बोगटीको लुगासुकाउने क्रममा करेन्ट टच हुदा ज्यान गएको छ।उनी श्रीमान सङ रोजगारीको सिलसिला भारत को तिलंगाना राज्यको हैदराबादको भुम्फलिमा बस्दै आएका
पूर्व मिस नेपाल शृंखला खतिवडा स्नातकोत्तर गर्न हावर्ड विश्वविद्यालय जाने !
स्नातकोत्तर गर्न जाने भएकी छन्। उनले आगामी अगस्ट महिनामा अध्ययनका लागि अमेरिका जान लागेको जानकारी दिइन्।आर्किटेक्चरमा स्नातक गरेकी खतिवडाले सहरी विकासमा स्नातकोत्तर गर्न लागेकी हुन्। उनले लकडाउन ताका फेरि थप अध्ययन् गर्ने रूची जागेको भन्दै गत जनवरीमा आवेदन दिएको सेतोपाटीलाई जानकारी दिइन्।विश्वकै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा अध्ययन् गर्न पाउनु जीवनको सबैभन्दा ठूलो सफलता रहेको उनले सुनाइन्। उनले
१० सेकेण्डको भिडियो क्लिप ८० करोडमा बिक्यो !
त्यो भिडियो झ्वाट्ट हेर्दा त्यतिधेरै रकम पर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । तर, भिडियो यतिधेरै चर्चित भयो कि अन्ततः करोडौँमा बिक्री हुने बहुमुल्य चिज बन्यो गत अक्टोबरमा मियामीका एक कलाकृति संकलनकर्ता पाब्लो रोड्रिगेजले उक्त भिडियोलाई ६७ हजार डलरमा खरिद गरेका थिए । सोही भिडियो हाल उनले ६६ लाख डलरमा बिक्री गरेका हुन् ।वास्तवमा डिजिटल आर्टिस्ट बिपलले
बिन्दास ज्योतिको आँखामा आँशु निकै भावुक हुदै भन्छिन् मेरो रेट सोधिन्छ !
लोक गायीका तथा कलाकार ज्याती मगरलाई निकै बिन्दास महिलाका रुपमा हेरिन्छ । उनी गायनमा मात्र नभएर नाचमा पनि उत्तिकै पारंगत छन् । उनले एक नाच प्रतियोगीमा पनि निकै राम्रो प्रतिभा देखाइन् । उनी गीत गाउँदा संगै स्टेजमा नाच्छिन् । त्यसैले पनि उनको माग यस्ता कार्यक्रमहरुमा हुने गर्छन । तर निकै फरासिली बोल्न नहिचकिचाउने ज्यातीले ब्यक्तिगत
यिनै हुन् धादीङमा डोजर चालकले जिउदै पुरेकी सरस्वती कुमाल !
धादिङमा एक महिलालाई घाइते बनाएपछि एक्स्काभेटरले पुरेको थियो ।धादिङको त्रिपुरासुन्दरी १ सल्यानटार क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम गरिरहेको एक्स्काभेटरले घाँस बोकेर जाँदै गरेकी महिलालाई ठक्कर दिएको थियो ठक्करबाट उनी सोही सडककोखाल्डोमा खसेकी थिइन् । त्यसपछि चालकले चारैतर्फको माटो सोही खाल्डोमा खसाएर घाइते भएकी सरस्वती कुमाललाई पुरेका थिए ।त्यस क्षेत्रमा रहेका केहीले डोजरले मान्छे पुर्‍यो भनेर हल्ला